कोरोना लाग्दा आउने ज्वरो-खोकी कस्तो हुन्छ? :: विवेक राई :: Setopati
लक्षण रुघामर्कीको हो वा कोरोनाको, कसरी थाहा पाउने?
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा बिहान-बेलुकी चिसो बढ्न थालेको छ। याम परिवर्तनसँगै मानिसहरूमा मौसमी 'फ्लु' देखा पर्न सक्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, टाउको दुख्नु, थकान महशुस हुनु लगायत मौसमी फ्लु (रुघामर्की) का लक्षण हुन्।
'फ्लुका कारणले ज्वरो आउँदा शरीर काम्दैन। बरू लामो समयसम्म चाहिँ आइरहन सक्छ,' उनले भनिन्।
साथै त्यो बेला मानिसलाई रूघाखोकी पनि भएको हुनसक्छ। जसलाई हामी 'कमन कोल्ड' पनि भन्छौं। तर रुघा लाग्दा नाकबाट पातलो पानी बग्ने र पछि त्यही पातलो पानी बाक्लो सिँगान हुँदै जाने डा. भट्ट बताउँछिन्।
'कोरोनाको खोकी एकदम सुख्खा हुन्छ। जति खोक्दा पनि कफ आउँदैन जुन अरू मौसमी रुघाखोकीमा मज्जाले आउँछ,' डा. भट्टले भनिन्।
कोरोनाका कारणले आएको खोकी हो भने सुरूआती समयमा मज्जाले नै लाग्ने उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, 'सुरूमा मज्जाले नै सुख्खा खोकी लाग्छ। तर कफ चाहिँ आउँदैन।'
'यति कुरा मात्र हेरेर कोरोना छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। टाउको, जिउ दुख्ने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण पनि ख्याल गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
'कोरोना छ भने आज ज्वरो आउने, भोलि टाउको दुख्ने, पर्सी थकान महसुश हुने र विस्तारै सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। तर फ्लुमा एकैपटक सबै लक्षण देखापर्छ,' उनले भनिन्।
उनी भन्छिन्, 'यो कुराले गर्दा कोरोना हो/हैन भनेर यकिन गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, खुट्टाको बुढी र चोर औंला रातो हुने लक्षण पनि कोरोनामा देखिएको छ। त्यसैले यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।'
सामान्य लक्षण भएका अवस्थामा घरमै सतर्कता अपनाएर बस्न सकिने बताउँदै उनले भनिन्, 'सुरूमै आत्तिनु हुँदैन। ज्वरो, खोकी जस्ता सामान्य लक्षण भएका पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर घरमै बस्न सकिन्छ। तर सास फेर्न थोरै मात्र गाह्रो भयो भने पनि अस्पताल दौडिहाल्नुपर्छ। त्यो बेला संक्रमितलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ।'
सम्बन्धित समाचारः कतै कोरोनाले तपाईंको अक्सिजन कम भएको त छैन, घरमै जाँच्नुस् 'अक्सिमिटर'ले
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २०, २०७७, ००:५३:००